१७ मंसिर, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम 2979
१७ मंसिर, काठमाडौं । खेल हो, हारजित हुन्छ नै । तर कुनै कुनै हारहरुले तपाईंलाई विथोल्छ । मंगलबार नेपालको महिला भलिबल टोलीले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को फाइनलमा भारतसित व्यहोरेको हार त्यस्तैमध्येको हो । हुन त यो सागमा नेपालले स्वर्ण पदकको वर्षा नै गरेको छ । तर, पनि सायद भलिबलको यो स्वर्ण अलि ‘बहुमूल्य’ थियो । यसका केही कारण छन् । पहिलो त टिम गेममा स्वर्ण जित्नुको महत्व बढी हुन्छ । दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय खेल भएको हिसाबले नेपालले भलिबलको स्वर्ण आफ्नै घरभित्र राख्नुको बेग्लै गरिमा हुन्थ्यो । तेस्रो, भलिबलमा नेपालले अहिलेसम्म भारतलाई एकपटक पनि हराएको इतिहास छैन । चाहे त्यो महिला भलिबल होस वा पुरुष । केही दिन अगाडि मात्रै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्णको रुपमा सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिता जितेर नेपाली महिला भलिबल टोलीले इतिहास रचेका थिए । यो सागमा पनि उनीहरुले अर्को इतिहास त रचिसकेका थिए, नेपाललाई फाइनलमा पुर्‍याएर । यसअघिका १२ वटा सागमा नेपालले महिला भलिबलमा जितेको भनेको तीन कास्य हो । यसपाली भने नेपाली टिमलाई स्वर्णकै भोक थियो ।
तर, त्यसका लागि पन्छाउनु थियो भारतलाई, जसले सागमा लगातार आफ्नो दबदबा कायम गरेको छ । सायद नेपालीहरुले पहिलोपटक टेलिभिजनमा नेपालको भलिबल म्याचको लाइभ यति कौतुहलतापूर्वक हेरेका थिए । फाइनल भिडन्त भएकाले मात्र पनि होइन, भारतविरुद्धको प्रतिस्पर्धा भएकाले पनि नेपालीहरुमा बढि उत्साह एवं भावुकता थियो । खेल पनि यति तनावपूर्ण बन्यो कि मुटुको धड्कन थामिने खालको । त्यसो त फाइनल म्याच अगाडि भारतको जितलाई केवल औपचारिकता ठानिएको थियो । समूह चरणमा यही भारतले नेपाललाई ३-० को सोझो सेटमा हराएको हो । त्यसैले पनि नेपालले जित्ने आशा क्षिण नै थियो । तर नेपाली चेलीहरुले साहसिक प्रदर्शन गरे । पहिलो सेट हारेका उनीहरुले दोस्रो र तेस्रो सेटमा रोमाञ्चक जित निकाल्दै भारतलाई २-१ को रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याए ।
पहिलो सेटमा नेपालमाथि हावी हुँदै भारतले २५/१७ को जित निकालेको थियो । तर दोस्रो सेट २५-२४ र तेस्रो २५-२१ ले जितेर नेपालले भारतलाई स्तब्ध तुल्याइदियो । आफूभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धीसँग संघर्षपूर्वक १-१ अंक जोड्दै दुई सेटमा माथ दिनु नेपाली चेलीहरुको बहादुरी प्रदर्शन हो । त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा दर्शकहरु खचाखच थिए । यस्तो माहोलले दुई धारे तरबारको काम गर्छ । एकातर्फ हौसला बढाउँछ भने अर्कोतर्फ दबाब । सायद नेपाली महिला भलिबल खेलाडीहरुले यस्तो चर्को हुटिङका बीच विरलै खेलेका थिए । तर कुनै पनि क्षणमा उनीहरुको सन्तुलन डग्मगाएको देखिएन । खेल हेर्दा भारतभन्दा नेपाली टिम एउटै पक्षमा अलि कमजोर देखियो- स्पाइक । त्यसो त स्पाइकबाट नेपालले धेरै अंक बटुल्यो पनि । खासगरी सरस्वती चौधरी र प्रतिभा मालीले निकै सटिक प्रहारहरु गरे । तर, भारतीय स्पाइकरहरुको प्रहार अलि बढि तेज र शक्तिशाली थियो । दुई टिमबीचको फरक यही नै भयो । बाँकी सर्भिस, ब्लक, रिसिभ सबै पक्षमा नेपाली खेलाडी चुस्त थिए ।
दोस्रो र तेस्रो सेट लगातार जित्दा नेपाली टिमको मनोबल उच्च थियो । त्यतिबेला भारतीय टिम नर्भस भएकै हो । तर चौथो सेटमा भारतले कमब्याक गर्न सफल हुनु नै नेपालको दुर्भाग्य भयो । गुमाउन आँटेको खेल पाँचौं सेटमा पुगिसकेपछि भारतीय टिमको खस्केको मनोबल फर्कियो । र, नेपाली टिममाथि पूर्णरुपमा हावी भए । निर्णायक समयमा नेपाली टिमको लय बिगि्रयो ।पक्कै पनि यो हार नमिठो थियो । सजिलै हारेको भए त्यसलाई पचाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला । जितको आभास पाइसकेपछि हार व्यहोर्नुपर्दा बढि पीडा हुन्छ नै । तर आज नेपाली भलिबल टिमले हारेर पनि जितेको भन्नुपर्छ । भारतलाई कडा टक्कर दिएर नेपाली महिला भलिबलले आफ्नो स्तरवृद्धिको सन्देश दिएको छ । सेन्ट्रल जोनमा जितेको स्वर्ण कुनै कागतालीले हासिल भएको थिएन भन्ने खेलाडीहरुले पुष्टि गरे । तर यो टिम अझै माथि उठ्ने ठाउँ छ र उठ्नुपर्छ । खेलाडीहरुले यो चोटलाई उर्जामा बदल्नुपर्छ ।
हामी सबैलाई थाहै छ, नेपाली खेलाडीहरुले सिमित स्रोत-साधनमा खेलिरहेका छन् । विदेशी खेलाडीहरुले पाउने सुविधाको तुलनामा हाम्रा खेलाडीहरुले पाउने सुविधा नगण्य छ । खेल हार्दा खेलाडीहरुलाई दोष दिन सजिलो हुन्छ । तर, उनीहरुले कस्तो परिवेशमा खेलिरहेका छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । नेपाली भलिबल टोलीले पनि सिमित स्रोतसाधनमा खेलिरहेको छ । एकातर्फ केटीहरुलाई खेल क्षेत्रमा समर्पित भएर लाग्न नै पारिवारिक र सामाजिक अड्चन छ । खेल क्षेत्रमा लाग्नु भनेको भविष्य विगार्नु हो भन्ने सोच्छन् धेरै बाबुआमा । नेपालका हकमा उनीहरुको सोचाई धेरै हदसम्म साँचो हो पनि । किनकी नेपालको खेल क्षेत्र अहिले पनि करिअरको रुपमा लिन सकेको छैन ।
सरकारले २०७४, साल जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्‍यो । तर त्यसपछि भलिबलको उत्थानमा के-के काम गर्‍यो त ? राष्ट्रिय खेल बनाइसकेपछि राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र ताकि त्यो खेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकोस । त्यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । तर, सरकार भने राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेरै आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठानिरहेको छ । मुल कुरा खेलाडीहरुको भविष्यको सुनिश्चितता हो । एउटा प्रतियोगिता जितेर आएपछि दिएको नगद पुरस्कारले खेलाडीलाई क्षणिक प्रोत्साहन मात्रै मिल्छ । उनीहरुको भविष्यको सुनिश्चितताको लागि दिगो कार्ययोजना चाहिन्छ । भलिबललाई अघि बढाउन यस्तो कार्ययोजना आवश्यक छ ।
नेपाली महिला भलिबल खेलाडीले सम्भावना देखाएका छन् । उनीहरुले धेरेभन्दा धेरै एक्सपोजर पाउनुपर्छ । जति बलिया टिमहरुसित भिड्न पायो त्यति नै आफ्नो खेल सुधार हुने हो ।साग फेरि पनि आउँछ । भारतसित नमिठो हारको बदला लिने मौका फेरि पनि आउँछ । तर त्यसका लागि टिमको स्तरवृद्धि गर्न सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । भलिबल जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पदक सम्भावना भएका खेलहरुलाई सर्ट लिस्टिङ गरेर तिनीहरुमा लगानी बढाउनु पर्छ । आज भलिबल खेलाडीहरुले बगाएको आँशुको मूल्य राज्यले चुक्ता गर्नुपर्छ ।अनलाईन खबरबाट साभार,
checked boucle scarf with braid fringe
Acido tricloroisocianurico al 90%
China Bus Shelters Polycarbonate Sheet
Battery Powered Exhaust Fan
Custom Printed Craft Paper Packaging Box Supplier
China Custom Printed Craft Paper Packaging Box
China Disposable Kraft Paper Bowl and Disposable Soup Cup price
Basketball In Bulk
??? ????? ! ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? [url=http://www.g3ogh78i777n62h4dibsm104555tcu3ks.org/]ufrebnxnoze[/url] frebnxnoze http://www.g3ogh78i777n62h4dibsm104555tcu3ks.org/ afrebnxnoze
El Shiny Brooch
Hublot???????? El Shiny Brooch